iminyaka siya Ngaphezu ezilishumi Amava Manufacturing, zobungcali motor lisiko blower, impompo umoya blower kunye fan radiator
FOB Price: US $ 0.5 -8 / Piece
Supply Amandla: 20000-50000Piece / Pieces Inyanga nganye
Material: Aluminium / Izinki
Iimveliso eboniswe apha kuphela ukuba anikele ububanzi imisebenzi yeshishini lethu. Sinako ukuvelisa naziphi na iindawo
ngokwendlela yakho umzobo okanye isampula.
impahla Ingxenye: ADC12
Umphezulu: Sand ukuqhumisa
Wokugaya ndlela: CNC
Machine Product: 800T
OEM umenzi leyo ngugqirha aluminiyam kwimveliso koxinzelelo oluphezulu thina ufe bephosa iindawo, ungenza lonke
inkqubo esuka ngumngundo kuyilo-ngumngundo ekwenziweni-test sokubumbela -die ngodongwe-machining-umphezulu unyango-ukuwahlola zethu
mveliso, Product abasingethe oomatshini zokwakha, izixhobo zonxibelelwano, iinkqubo amandla izithuthi, ugesi
forklifts, iimoto zombane, isilawuli esizisebenzelayo mveliso kunye nezinye izifundo ezinxulumene noku.
Aluminium Ukukhanyisa Housing:
Q: Ingaba umzi-mveliso okanye inkampani sorhwebo?
A: Singabantu njengomvelisi professional ukuba ayile aze ukuvelisa
Q: Ingaba wenza iimveliso esingabizi okanye iindawo ugqibile?
A: zonke iindawo azikho imfuyo, zenziwe ngohlobo kwimizobo umxumi okanye iisampulu! Ukuba unayo nayiphi na iindawo ekufuneka zenziwe, nceda uzive ukhululekile ukuthumela imizobo uhlobo / iisampulu zakho kuthi.
Q: umzobo wam uza kuba ekhuselekileyo emva uwufumana?
A: Ewe, asiyi kukhupha uyilo yakho umntu wesithathu ngaphandle ngemvume yakho.
Q: Yintoni na MOQ?
A: Ngesiqhelo musa ukuyibekela thina MOQ, kodwa ngakumbi, lo enganeno. Ngapha koko, yabonwabisa into awabenzela prototype inxalenye okanye isampuli ukuba abathengi ukuqinisekisa umgangatho umgangatho thina.
Q: Ingaba wenza bephosa isekelwe kwiisampuli zethu?
A: Ewe, sinako ukwenza umlinganiselo ngokusekelwe kwiisampuli bakho ukwenza imizobo ukuze ithathe tooling.
Q: Yintoni isixhobo kolawulo lwakho umgangatho endlwini?
A: Thina spectrometer, umatshini uvavanyo eqine kunye UT Sonic njengoko NDT indlela ukuhlolwa ukulawula ukulahlwa ukubona phantsi kwamanzi eyahlulayo.
Previous: processing aluminium OEM kufa ekhupha iindawo
Aluminium Oli Pump Body
Aluminium Die Baza, Auto Oil Pump
Aluminium Oil fracturing Pump Body
Die Taya Aluminium Oil Pump
Die Baza, Pump For Auto
Die Baza, Pump Water
Aluminium die ekubunjweni blower flanges iindawo